जलविद्युत् क्षेत्रमा नियामक निकाय हुनुपर्छ | गृहपृष्ठ
Home अन्तरवार्ता जलविद्युत् क्षेत्रमा नियामक निकाय हुनुपर्छ
अन्तरवार्ता, मुख्य खबर 44 views
जलविद्युत् क्षेत्रमा नियामक निकाय हुनुपर्छ
कुमार पाण्डे कार्यवाहक अध्यक्ष, नेशनल हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड
लामो समयदेखि जलविद्युत् क्षेत्रमा काम गरेका नेशनल हाइड्रोपावर कम्पनीका कार्यवाहक अध्यक्ष कुमार पाण्डेसँग यो क्षेत्रमा राज्यको भूमिका, निजीक्षेत्रले भोगेका समस्यालगायत विषयमा केन्द्रित रहेर नेशनल हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेडका कार्यवाहक अध्यक्ष कुमार पाण्डेसँग आर्थिक अभियानका हिमा वि.कले गरेको कुराकानी :
हाल परियोजनासम्बन्धी के–कस्ता काम गर्दै हुनुहुन्छ ?
अहिले कम्पनीबाट सिन्धुपाल्चोकमा रहेको इन्द्रावती तेस्रो जलविद्युत् आयोजना (७.५ मेवा)मा काम गरिरहेका छौं । इन्द्रावतीको तेस्रोको क्यास्केडको रूपमा तल्लो इन्द्रावतीको लाइसेन्स लिने काममा पहल गरिरहेका छौं । आधा काम सकिएर पनि आयोजनाको लाइसेन्स खारेज भएको छ । भोजपुरको इखुवा खोलामा १४ मेगावाटको आयोजना बनाउन लागेका छौं । त्यसका लागि लाइसेन्स आउने क्रममा छ । विद्युत् खरीद सम्झौता (पीपीए)को मस्यौदा तयार भएको छ । यो आयोजनाको काम यही वर्ष अघि बढ्छ । हालै कास्कीको माङ्गे खोलामा १२/१३ मेवाको आयोजनामा अध्ययन शुरू गरेका छौं । इखुवा खोलाको काम सकेपछि त्यो आयोजना शुरू गरिनेछ । कम्पनीको लगानी रू. १ अर्ब ३८ करोड छ भने रू. ऋण १५ करोड छ ।
कम्पनी स्थापना भएदेखि मुनाफा वितरण गर्न सकिएको छैन, हामी प्रयासरत छौं । क्यास्केडको रूपमा निर्माण हुने तल्लो इद्रावतीको लाइसेन्स पाउनेबित्तिकै सर्वसाधारणलाई मुनाफा दिन्छौं ।
लाइसेन्स पाउने सम्भावना कत्तिको छ ?
यो आयोजनाको आधा काम सकिएको छ । बाटो, प्रसारणलाइनका साथै अन्य संरचना बनेका छन् । हामी आउनुभन्दा पहिला यो कम्पनीको व्यवस्थापनमा ठूलो समस्या थियो । तर, कम्पनी पब्लिक लिमिटेड भएकोले एउटा व्यवस्थापनले गर्न सकेन भनेर जनताको शेयर रहेको कम्पनी सरकारले ओगटेर बस्नु हुन्न । अर्कोतर्फ, सरकारले त्यो आयोजनामा काम पनि गरेको छैन, जनतालाई फिर्ता पनि गरेको छैन । त्यसैले, यो आयोजनाको लाइसेन्स ब्युँताउन पहल गरिरहेका छौं ।
तपाईं यस क्षेत्रमा प्रवेश गरेर अहिलेसम्म आइपुग्दा के कस्ता परिवर्तन भएका छन् ?
म यस क्षेत्रमा आएको २५/२६ वर्ष भयो । त्यति बेला नीति–नियमभन्दा पनि कम्पनीको अण्डरमा बसेर काम गर्नुपर्ने अवस्था थियो । २०४९ सालमा विद्युत् ऐन आएपछि निजीक्षेत्रलाई लगानीको वातावरण बन्यो । २०५६ मा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले निजीक्षेत्रले उत्पादन गरेको बिजुली किन्ने निर्णय गर्‍यो । १८ वर्षको उपलब्धि हेर्ने हो भने प्राधिकरण र निजी कम्पनीको करीब बराबर क्षमताको उत्पादन छ ।
हाल ३ हजार मेवाका आयोजना निर्माणाधीन छन् । तीमध्ये अधिकांश (२८ सय मेवा) क्षमताका आयोजना निजीक्षेत्रले निर्माण गर्दै छ । अध्ययन भएका १२ हजार मेवामध्ये ११ हजार मेवाका आयोजना निजीक्षेत्रका छन् । देशमा सहज वातावरण नहुँदा नहुँदै पनि निजीक्षेत्रले हाइड्रोमा लगानी गरेको छ, जसले गर्दा जलविद्युत् क्षेत्रले धेरै फड्को मारेको छ । यो क्षेत्रमा पैसा भएका मात्रै लगानीकर्ता आउने वातावरण हटेको छ । दशौं हजार नागरिक यो क्षेत्रका लगानीकर्ता छन् ।
यस क्षेत्रका मुख्य समस्या के के हुन् ?
सरकारले गरेका प्रतिबद्धता पूरा नहुँदा समस्या भएको छ । सरकारले तोकिएकै समयमा आयोजना सम्पन्न गरे दिने भनेको थप २० प्रतिशत प्रोत्साहन रकमको अत्तोपत्तो छैन । भ्याटबापत अनुदान पाउने व्यवस्था बजेटमा आएको छ, तर कार्यान्वयन छैन । जग्गा उपलब्धि जटिल छ । ७ वर्षदेखि पीपीए दर एउटै छ र आगामी ३० वर्षसम्म पनि सोही दरमै विक्री गर्नुपर्ने भनिएको छ । जलविद्युत् क्षेत्रमा आउने लगानीलाई आकर्षित गर्न ब्याजदर नियन्त्रण हुनुपर्छ । यस्ता समस्याको न्यायोचित रूपमा समाधान गर्नुपर्छ । अब सस्तोमा बिजुलीको उपभोग र उत्पादन भएको बिजुली खपत कसरी गर्ने, यी दुईओटा विषयमा स्पष्ट हुनुपर्छ ।
अर्को कुरा, मुलुक सङ्घीयतामा गएको छ । सोहीअनुसार निर्माण भएका तहको अधिकार क्षेत्र कहाँ हो भन्ने स्पष्ट हुनुपर्छ । सङ्घ, प्रदेश, स्थानीय तहको भूमिका/अधिकार के हुन्छ भन्ने विषयमा स्पष्ट हुनुपर्छ । यसमा निजीक्षेत्रको भूमिका के हो भन्नेमा हामी पनि सचेत हुनुपर्छ । जस्तै– अहिले हामीले राजस्व केन्द्रमा तिरेका छौं । अब स्थानीयलाई दिने रोयल्टी के हो ? कर तिर्ने कि नतिर्ने ? इजाजत कसले दिने ?, वातावरण अध्ययन कसले स्वीकृत गर्ने ? जनताका लागि भौतिक संरचना बनाइदिने हो कि रकम दिने ? यस्ता नीतिगत विषयमा टुङ्गो लगाउनुपर्छ ।
यो व्यवसायमा लागेको निजीक्षेत्रका के कस्ता कमजोरी छन् ?
जलविद्युत्मा लागेका निजीक्षेत्रको समस्या सरकारसँग जोडिएको छ । निजीक्षेत्र आफैले सबै काम गर्दैन । त्यसका लागि नियामक निकायको सहजीकरण र निगरानी आवश्यक हुन्छ । जलस्रोतमा नियामक निकाय नहुँदा अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा, प्राविधिक रूपले आयोजनाको समय, लागत, गुणस्तरलगायत विषयमा विकृति आएका छन् । त्यस्तै, कसले कुन आयोजना बनाउने, कुन तरीकाबाट बनाउने भन्ने स्पष्ट छैन । हामी आयोजना ३० वर्षसम्म राख्छौं र पछि सरकारलाई हस्तान्तरण गर्छौं । त्यस्ता आयोजनाको प्राविधिक पक्ष, सर्वेक्षण, बनाउने तरीका, आर्थिक संरचना, गुणस्तरका कुरा सर्वेक्षण गर्न कसैले नियमन त गर्नु पर्‍यो ।
ठूला परियोजनामा जाने सोच के छ ?
प्राविधिक, व्यवस्थापकीय रूपमा सानो ठूलो भनेर फरक छैन । अहिले बजार, लगानी, पीपीएको हिसाबले नेपाली लगानीकर्ता ठूलो लगानी तत्कालै गरिहाल्ने अवस्थामा छैनन् । तर, ठूलै आयोजना आउँदा समूहमा बसेर काम गर्न सकिन्छ । हामी ठूला आयोजनामा जानैपर्छ ।
‘ठूला देशको कार्बन उत्सर्जनले नेपालका हिमालमा असर देखिनु दुःखद’
१० बैशाख २०७५, सोमबार १६:३५